U adeegso USB-ga furaha furaha Linux. | Laga soo bilaabo Linux
U adeegso USB-ga furaha furaha Linux.
@Jlcmux | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Marar badan waxaan raadineynaa qaababka ugu wanaagsan ee aan ku hubin karno kombuyuutarkeena adoo furayaasheena ku dhejinaya bayoolajiga, qeybta hoose, bilowga kal-fadhiga, oo aan ku qarinayno gurigayaga / gurigeena, marka la soo koobo, waxaa jira noocyo badan.
Casharradan yar yar ayaa runtii ka soo baxay cillad shaybaar: P. Intii aan iskudayay inaan abuuro kumbuyuutar badan oo isos badan leh, waxaan sameeyay (qalad ahaan) ciilkeyga, kan nidaamkeyga hooyo, si loogu gudbiyo USB-ga.
Ka dib markii dib loo furo nidaamkeyga si aan u tijaabiyo «USB Multiboot»Waan argagaxay sababtoo ah waxaan xamuulkayga buuxiyay, fariinta argagaxa leh ee:
Qiyaas ahaan waxaan isku dayay inaan bilaabo USB-ga si aan u arko inuu shaqeeyay iyo ugu yaraan inaan awoodo inaan ku hagaajiyo livecd aan ku shubay USB-ga, laakiin oh! Yaab .. Waxaan bilaabay cowskayga si caadi ah. Isticmaal kumbuyuutarkeyga furaha.
Sida loo isticmaalo kumbuyuutarkeyga furaha
Halkani waa halka uu macallinkani ku dhashay. In kasta oo wax yar la raadinayo, tan mar hore ayaa laga hadlay dad badanna runti way isticmaalaan, maxaa yeelay iyaga ayaan baraa, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa
Halka SDX u taagan tahay USB-gaaga.
Dhamaadka, ha ilaawin inaad gasho BIOS oo u sheeg pc-ga inuu ku bilowdo USB. Hadana tan hadaad ku darto lambar sir ah BIOS-kaaga si aysan u isticmaalin livecd 🙂
Si aad u badbaado, Buur xijaab oo dib u eeg faylka /boot/grub/grub.cfg oo hubi in qashinku ka kooban yahay buudhkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » U adeegso USB-ga furaha furaha Linux.
Waxaan u maleynayaa in SuperGrubDisk oo ku gubtay USB-ga aad sidoo kale kicin karto nidaamka adigoon haysan USB-ga aad ku rakibtay boot-ka GRUB, sax?
Hadday taasi tahay sababta aan sidoo kale u idhaahdo gelinta erayga sirta ah ee BIOS, si aanay u beddelin amarka bootka.
Waxaad batteriga ka saareysaa bios-ka oo waxaad dhahdaa bye pass (sidoo kale waxaa jira arrin ku saabsan ka saarista ama beddelka booska boodboodka iyo bios-ka ayaa loo qoray)
isku mid kiiskaas ma noqon doono kalfadhiga laakiin bilowga murugada. Soo galintu waa marka qofku soo galo.
Waxa kale oo aad ka boodi kartaa fikraddaada haddii aad ku gubto supergrubdisk USB-ga oo aad la socoto inaad dayactirto cirifka
jidka agtiisa, waxaa jira barnaamij (ma xasuusto magaca) oo aad adigu u habeyn kartid sidaa darteed haddii uusan santuuquhu ku xirnayn, kal-fadhiga si otomaatig ah ayaa loo xirayaa. sidoo kale waxaa loo qaabeyn karaa bluetooth. Sidaa darteed, adoo adeegsanaya taleefanka gacanta fure ahaan, haddii mid ka fogaado kombuyuutarka, si otomaatig ah ayuu u xiraa.
wax ku habboon marka qofku ka shaqeeyo jawiga xafiiska oo ay asxaabteennu yihiin xishooyin soo gala waxyaabahayaga
Haddii aan helo magaca markaa waan kuu soo dhejinayaa si aad u tijaabiso
barnaamijka waxaa loogu yeeraa blueproximity wixii aan u arko inuusan ahaan laheyn USB-ga laakiin loo isticmaali lahaa Bluetooth etooth http://blueproximity.sourceforge.net/
Waxay u egtahay mid xiiso leh Bluetooth dartiis
Ku jawaab XBDsaberaprender
Noooo, taasi waa wax fiican! .. ..Waan sii rakibayaa .. ..Waan isku dayay, hadday fiicantahayna .. Maalmo ka dib ayaan qoraal ku soo qori doonaa .. 😉
Waad ku mahadsantahay wadaagista, ma aanan aqoon isaga ..
Xaqiiqdii waxaan ka helay qoraal halkan ku yaal barta ku saabsan qalabkan.
Dabcan, waxay si fudud uga soo kabataa pendrive. Warbaahin kasta oo USB-ga ah oo la dhaqaajin karo ayaa shaqeyn doonta. Iyo xitaa kuwa kale haddii aad leedahay dalab boot ah bios-ka. Laakiin waa sheeko xiiso leh oo ka timid qalad aadamiga, waana halka ay waxyaabaha ugu fiican ku dambeeyaan 😉
Ku jawaab Blackgem
Waad salaaman tahay, waxaan helay fikradda ah in pendrive laga dhigo fure furaha pc-ga oo xiiso leh. Ma jiraa qof og haddii ay suurtagal tahay in loo qoro qaybta boot-ka ee loo yaqaan 'pendrive', anigoo u maleynaya inaan haysto qormooyinkeyga diskiga oo la ixtiraamo iyo lambarka sirta ah ee lagu qoro qaybta keydka? Waxay faa'iido u lahaan laheyd xaqiijin laba-geesood ah, maadaama aad u isticmaali laheyd USB + lambarka sirta si aad u bilowdo nidaamka. Sida iska cad USB-ga waa in la xoojiyaa haddii ay dhacdo in khasaaro ama shil dhaco. Cafi su'aasha, waxaan ka qorayaa jahligayga qotada dheer ee ku saabsan nidaamka boot-ka Linux.
Mahadsanid!!. Tani waa waxaan raadinayay maalmo yar kahor, waxaan xasuustaa inuu jiray sharci arintaan quseeya laakiin magaca ma xasuusto. Salaan ka timid dhinacan bulshada ka tirsan !!
Ku jawaab crunchyuser
Waxaan qabaa su'aal: miyaan ku rakibi karaa USB-ga inta lagu gudajiro debian?
Wanaagsan! Ugu dambayntii waxaan ka tagi karaa qolkayga quful la'aan anigoon ka baqaynin in la igu xD
waad ku mahadsantahay macluumaadka waxtarka badan leh
haha xiiso leh it .. waxay iga dhigtay inaan xasuusto tan: http://javierperez.com/blog-antiguo/bloqueo-y-desbloqueo-de-pantalla-por-detector-de-presencia-en-ubuntu-con-bluetooth-aimtooth/
in kasta oo aysan isku mid ahayn haddana waa sidoo kale «qiyaas nabadgelyo»
aan isla ogolaano in haddii aad awood u leedahay inaad qalabka adeegsato aysan jirin ammaan u qalma… .sagaal markaan wax walba sirno!
Ku jawaab Guidoignacio
Jimel Raven dijo
Suurtagalnimada kale ayaa ah in sirta la adkeeyo oo loo isticmaalo fure furaha.
Waa maxay fikrad fiican. Sidaa darteed kan ugu fudud ayaa ah waxa ugu fiican.
Aad asal ah Waxaan ka fekeri karaa codsiyo dheeri ah, tusaale ahaan, markaan dib u daaqado daaqaddiisa ku xirno oo aan tirtirno qashinka, haddii aan horay u haysan lahayn qalabkeena, uma baahnin wax kale. Waxaan ku abuureynaa shaashadda pendrive ka dibna waxaan dib ugu cusbooneysiin doonnaa USB-ga.
waan ka xumahay: waxaan dib ugu abuurnay qeybteena 😀
Waxaan tijaabiyey qiyaastii sanad ka hor wayna shaqaysaa, waxaan haystay USB-ga oo leh laba qaybood, mid kamida 200Mb bootka, hadaad kumbuyuutarka bilawdo adoon USB ku xirnayn, wuu kabahayaa Windows, marka laga reebo qaybta GNU / Linux waa la qariyey, haddii aad ku bilaabatay USB-ga oo cirridka ayaa muuqday.
Ku lifaaqan tan Windows, waxaan ku haystay Prey, haddii ay dhacdo in laptop-ka la xado, waxay ku kici lahaayeen Windows, waana lala socon lahaa.
Waxay ahayd mid xiiso leh.
Maqaal wanaagsan mise qodob xun? Wax kastoo ixtiraam leh laakiin
GT: Tank War, waa ciyaar bulshada dhexdeeda ah